Wasiirada gobolada Sanaag iyo Hayland | allsanaag
Wasiirada gobolada Sanaag iyo Hayland
21st January 2022 admin Category :
Degaankee ayaa xaq u leh inay ka yimaadaan wasiirada soo socda ee gobolada Sanaag iyo Hayland?
Golaha wasiirada Puntland ee dhowaan la soo magcaabi doono, waa in wasiirka ka mid noqonayaa ee ka soo jeeda gobolka Sanaag uu ka yimaadaan Degmada Ceerigaabo, Damale Xagare iyo Carmale. Gaar ahaan beesha Bah ogayslabe oo aan Xildhibaano ku lahayn golaha baarlamaanka Puntland iyo Federaalka. Wasiir iyo wasiir ku xigeena aan ku lahayn dawladdii hore ee Madaxweyne Gaas,
Beeshan ayaa ka mid beelaha ugu awooda badan gobolka Sanaag, kana mid ah kuwooda ugu degaanka weyn . Haddii wasiir loo magcaabo beeshan waxay dhabar jab weyn ku tahay maamulka SNM. Beesan haddii wasiir loo magcaabo si fudud ayuu maamulka Puntland ku gaarayaa Bartamaha degmada Ceerigaabo,
Gobolka Hayland. si shakiga ku jira looga saaro iyo in beel gaar ahi ay gooni u leedahay, waa in wasiirka ka imanayaa gobolkaasi uu noqdaa mid ka yimaada degmooyinka kale ee gobolka Hayland hoos yimaada ee ka ahayn degmada Dhahar.
Ugu danbayntii Suldaanka beesa Warsangeli Suldaan Siciid, waxaan kula talin lahayn haddii maamulka cusub ee Puntland ay talo ku soo waydiiyaan ku saabsan wasiirada la soo magcaabayo waa inaad kula taliso wasiirka gobolka Sanaag Halka uu ka imanyo inay ahaato beesha Bah Ogayslabe . Suldaan Siciid taladaadu ha noqoto siyaasi ka soo jeeda degaanada hoos yimaada degmada Ceerigaabo. Bulshada Wasiirka laga soo dhex dooranayo waxaan kula talin lahayn inay wasiirka imanaya la shaqeeyaan si maamula Puntland u soo gaaro bartamaha magaalada Ceerigaabo
← Maraykan oo uu u jawaabay Seediga ugu daacadsan Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ka hadlay sababtii loogu diiday Khudbaddii Garowe →